ထှကျမွောကျရာ 20: 1-17 နှင့်တရားဟောရာ 5: 6-21 ။
ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ္တုပြည်သည်ဣသရေလအမျိုးကိုလူများကိုအပ်မကြာမီတွင်ပြီးနောက် ဧဒုံပင်လယ်ဖြတ်ကူး သူတို့သိနာတောင်ပေါ်များ၏ရှေ့မှောက်၌စားခန်းချကြ၏ဘယ်မှာသိနာဖို့ကန္တာရမှတဆင့်ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ထို့အပြင်တောင်ပေါ်မှာဟောရပျဟုချေါသိနာတောင်ပေါ်, အလွန်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီမှာဘုရားသခငျသညျသူအဲဂုတ္တုပြည်သည်ဣသရေလအမျိုးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဖူးအဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုပြောပြ, တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်မောရှေနှင့်အတူနှုတ်ဆက်လေ၏။
တစ်နေ့တွင်ဘုရား ဟူ. ခေါ်ဝေါ် သည်မောရှေ တောင်ထိပ်ဖြစ်သည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါး - သူသည်မောရှေသည်လူများအဘို့အဥပဒေများကိုသူ၏စနစ်သစ်၏ပထမဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပေး၏။ ဤရွေ့ကားပညတ်တော်ဘုရားသခင်သည်မိမိလူတို့အဘို့ရည်ရွယ်ဝိညာဏနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားလူနေမှု၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအကျဉ်းချုံး။ တစ်ဦးကျြမှောကျခတျေများအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုပြောခြင်းတို့နဲ့ ပညတ်တော်ဆယ်ပါး Paraphrased ။
ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘဝများနှင့်သူတို့၏ဝတ်ပြုရေးတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အရပ်ဖက်နှင့်အခမ်းအနားဥပဒေများအပါအဝင်မောရှေအားဖြင့်မိမိလူမျိုးဦးတည်ချက်ပေးရဆက်ပြောသည်။ နောက်ဆုံးတော့ဘုရားသခငျသညျရက်ပေါင်း 40 နှင့် 40 ညအဘို့အတောင်တော်မောရှေအားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤအချိန်သူမောရှေဘို့ညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့တယ် ရာတဲတော် နှင့်ပြုသောပူဇော်သက္ကာ။
ကျောက်ခေတ်၏ Tablet များ
ဘုရားသခငျသညျအပျေါမောရှေအားစကားပြောလက်စသတ်သောအခါ, သိနာတောင်ပေါ် သူ့ကိုနှစ်ခုပေးခဲ့တယ် ကျောက်တက်ဘလက် ညျဘုရားသခငျ၏အလွန်လက်ချောင်းများကရေးထိုး။ အဆိုပါတက်ဘလက်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးပါရှိသည်။
မောရှေသည်ဘုရားသခင်ထံမှသတင်းစကားနှင့်အတူပြန်လာရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတောအတွင်း, ဣသရေလအမျိုး၏ကလူစိတ်မရှည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မောရှေသည်လူများ, သူ့ကိုအပ်နှင့်အာရုန်ကိုတောင်းပန်သောကြောင့်ကြာမြင့်စွာအဘို့သွားပြီခဲ့ မောရှေ၏အစ်ကို သူတို့ဝပ်ကိုးကွယ်နိုင်အောင်သူတို့ကိုယဇ်ပလ္လင်တခုကိုတည်ဆောက်ရန်။
တဖန်မောရှေအားဆင်းကျောက်ပြားနှင့်အတူတောငျပျေါမှရောက်လာသောအခါ, သူ့ အမျက်ဒေါသ ကိုသူရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကူးပေးတဲ့လူတွေမြင်သည်အတိုင်းမီးရှို့ကြ၏။ သူကတောင်ခြေမှာအပိုငျးပိုငျးကသူတို့ကိုရမ်းပြီးကျောက်ပြားနှစ်ပြားကိုဆင်းပစ်ချ၏။ ထိုအခါမောရှေသည်ဖျက်ဆီးခံရ ရွှေနွားသငယ်ကို မီးထဲမှာမီးရှို့။
ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုဘုရားသခငျ၏ကိုယ်ပိုင်အသံသည်မောရှေအားမိန့်နောက်မှဘုရားသခင်၏အလွန်လက်ချောင်းတို့ကကျောက်ပြားနှစ်ပြားပေါ်မှာရေးထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာဘုရားသခင်အားအလွန်အရေးကြီးလှသည်။ တဖန်မောရှေအားဘုရားသခင်ကရေးထိုးကျောက်ပြားဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်သူသည်မောရှေ့ကိုသူသညျမိမိစာဖြင့်ရေးသားခဲ့သူတွေကိုကဲ့သို့သစ်တွေရေးဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဤရွေ့ကားပညတ်တော်သညျဘုရားသခငျ၏တရားစနစ်၏ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးဖြစ်ကြသည်။ အနှစ်သာရမှာတော့သူတို့ကဓမ်မဟောငျးကမျြးဥပဒေတှငျတှေ့ဥပဒေများ၏ရာပေါင်းများစွာ၏အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်၏။ သူတို့ကဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားလူနေမှုများအတွက်အပြုအမူ၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဆက်ကပ်။
ယနေ့ဤဥပဒေများပါသေး, ကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်နိုင်မည်အကြောင်းအပွစျကိုဖျောထုတျ, ငါတို့ဘုရားသခငျ၏တစံပြသပါ။ ဒါပေမယ့်မပါဘဲ သညျယရှေုခရစျ၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ကျနော်တို့ညျဘုရားသခငျ၏သနျ့ရှငျးသောစံအထိအသက်ရှင်ဖို့ရှင်းရှင်းအကူအညီမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
တဖန်မောရှေအားအမျက်တော်အတွက် tablet များဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ ကျောက်ပြားသူ၏ကြေကွဲသည်သူ၏လူများ၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျိုးပဲ့ခံရသညျဘုရားသခငျ၏ဥပဒေများ၏သင်္ကေတဖြစ်ခဲ့သည်။ မောရှေသည်အပြစ်တရား၏အမျက်မှောက်မှာဖြောင့်မတ်အမျက်ဒေါသရှိခဲ့ပါတယ်။ အပြစ်တရားမှာအမျက်ဒေါသ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ် ဝိညာဉ်ရေးရာကျန်းမာရေး ။ ဒါဟာဖြောင့်မတ်အမျက်ဒေါသကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်သင့်လျော်သည်, သို့သော်ကျနော်တို့ကအမြဲအပြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြမဟုတျကွောငျးသတိထားရပါမည်။
မောရှေသည်တောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်နှင့်အတူကွယ်ပျောက်ခဲ့ပေမယ့်, အဘယ်ကြောင့်လူအကိုးကွယ်ရန်တစ်ခုခုအာရုန်ကိုတောင်းပန်ခဲ့တာလဲ အဖြေငါယုံကြည်လူသားများကိုးကွယ်နေသူများကဖန်တီးနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဘုရား, ကိုယျ့ကိုယျကို, ပိုက်ဆံ, ကျော်ကြားမှု, အပျော်အပါး, အောင်မြင်မှု, ဒါမှမဟုတ်အမှုအရာကိုးကွယ်ကြလော့။
ရုပ်တုကိုသငျသညျဘုရားသခငျသညျထက်ပိုအရေးကြီးပုံကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုးကှယျရာကိုမဆို (သို့မဟုတ်မည်သူမဆို) ရှိနိုင်ပါသည်။
Louie Giglio ငါ Breathe စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ Conferences ကနှင့် The Air လေကြောင်းလိုင်း၏စာရေးဆရာကိုတည်ထောင်သူ: ကိုးကွယ်မှုဟာဘဝတစ်လမ်းအဖြစ်, သင်သည်သင်၏အချိန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အခါမှာ "ဟုပြောသည်, စွမ်းအင်, နှင့်ငွေ, သင်ကရာဇပလ္လင်ကိုရှာဖွေပြီးတော့သမျှသို့မဟုတ်အကြင်သူ၏အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းရာဇပလ္လင်သည်သင်၏ဝတ်ပြုရာအရာဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ "
သငျသညျစောင့်သောရုပ်တုရှိပါသလား တမှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သင့်ရဲ့ရာဇပလ္လင်၏ဗဟိုအပေါ်ခံများထံမှ?
ထိပ်တန်း 10 Selena Gomez သီချင်းများ
Rolling ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ် Yahtzee
Space ကိုအဘယ်မှာ Begin ပါသလား?
သူတို့ကမှန်ကဘာလဲ ... ထိုမျှမက Are: ပုံမှန်မဟုတ်သောမြေပြင်အခြေအနေများ
ငါက Business ဘွဲ့ရယူနိုင်သောသငျ့သလော
ပြင်သစ် Phrase 'a အခြေအနေ Que က' Subjunctive ယူ
အဓိပ္ပာယ်နှင့် Meronyms နှင့် Holonyms ၏ဥပမာများ
Waheguru - အံ့ခြီး Enlightened
ပုစွန်ကိုရယူရန်အကြောင်း5ပျော်စရာအချက်အလက်
အာကာသအတွင်းရေ Freeze သို့မဟုတ်ပြုတ်တဲ့ Glass ကိုမလား
သိသာထင်ရှားသော Feminist ဆန္ဒပြ
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း Duran Duran သီချင်းများ